China ọlaọcha ntekwasa polyamide conductive / echebe ákwà na-emepụta | 3L Tex
Dị ọcha ọlaọcha ntekwasa polyamide akwa
The kacha mma conductive echebe ákwà na antibacterial ọrụ, ọlaọcha ntekwasa na poli amide / naịlọn isi ihe onwunwe, ọ bụ ihe na-eyi na-eguzogide ọgwụ, adụ na ala. Ọ bụ a elu-tech ngwaahịa nwetara site na-adịgide adịgide bonding ọlaọcha na naịlọn ihe onwunwe site a pụrụ iche elu Usoro. Ihe owuwu a anaghị eme ka eriri ọlaọcha nọgide na-enwe ihe onwunwe nke textile mbụ, kamakwa ọ na-enye ya ọrụ anwansi niile, mmetụta nke ọlaọcha. Dị ka ezigbo ihe okike, ọlaọcha zuru oke, gburugburu / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ịchekwa.
Main Njirimara: Oké nkwụsi ike dị elu, arụmọrụ na-arụ ọrụ mkpuchi dị elu, ikpuchi ikuku mmiri, mgbochi radieshon, antibacterial, deodorant (ajụ), kpochapụ ọkụ eletrik, ahụ ike na-akpali akpali, na-edozi okpomọkụ, mgbochi UV, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ikuku dị elu, nke nwere ike ịsacha / gbanwee Na-enwu, mmetụta nro silk.
Main Ngwa: Ihe zuru oke maka ikpuchi, mgbochi radieshon, uwe dị mma, ngwa na akwa textiles, uwe mgbochi nje, nkpuchi, uwe aka na textiles ụlọ, ngwaahịa ọgwụ, egwuregwu, uru anụ ahụ, ngwaahịa na-eduzi, ngwaahịa mgbochi.
Shield irè: 60.0dB-71.0dB
Ọlaọcha na-eduzi nke ọma ma nwee ọta mkpuchi electromagnetic. Mgbe ndị mmadụ na-eyi uwe mgbochi ngwa agha / ngwa iji kpọtụrụ ngwaọrụ eletrọniki, uwe mgbochi electromagnetic nwere ike na-eduzi ngwa ngwa na ebili mmiri electromagnetic n'ụzọ dị irè, si otú ahụ na-echebe ahụ site na ebili mmiri electromagnetic.
Nke gara aga: Silver ntekwasa spandex conductive / echebe ákwà
Osote: RFID eduzi ntupu
Ugboro abụọ chere ihu silver conductive ákwà
Ugboro abụọ ihu ọkụ na-eguzogide ọgwụ conductive ákwà